Jubbada Hoose: Diyaaradaha Kenya oo Duqeyn ku dilay dad shacab ah | HalQaran.com
Home Warar Cusub Jubbada Hoose: Diyaaradaha Kenya oo Duqeyn ku dilay dad shacab ah
J/Hoose (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya Gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka Kenya ay duqeeyeen tuulooyin hoostagga deegaanka Hooshingow ee Gobolka Jubbada Hoose.
Wararka ayaa sheegaya, in diyaaradahan ay duqeyn ka gaysteen tuulooyinka Buriya, Baqdaad iyo Weel-mareer, oo dhammaantoodba hoos-tagga deegaanka Hoosingow oo xuduuda dhaca.
Duqeyntu waxay ka dambeysay, ka dib markii uu soo geba-gaboobay weerar xoogan, oo gelinkii dambe ee Arbacadii maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen xerada Militariga Kenya ku leeyihiin deegaanka Hoosingow, waana weerarkii labaad oo xeradaasi lagu qaado wax ka yar labaatan saacadood.
Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay, laba kalana way ku dhaawacantay duqeynta ka dhacday tuulada Buriya, oo qiyaastii 15km u jirta Hoosingow, illaa iyo hadda inta laga warqabo.
Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in gantaal ku dhacay guri ay xoolo dhaqato degan yihiin inay sababtay waxyeelada dadka rayidka, sidoo kalana waxaa jira duunyo ku la’atay duqeyntaasi.
Qofka keliya ee laga warqabo inuu duqeynta ku geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray Mahad Geesey Nuur (Suubane), halka labada dhaawaca uu soo gaaray lagu kala magacaabo Xasan Geesey Nuur iyo Faarax Geesey Nuur, waana saddex nin oo wada dhashay, kana mid ah xoolo dhaqatada deegaanka.
Si kastaba ha’ahaatee, duqeymaha diyaaradaha Kenya ka gaystaan deegaanada Jubbaland ayay inta badan waxyeelo ka soo gaartaa dadka deegaanka, tiiyoo aanay jirin cid kala xisaabtanta Xukuumadda Nairobi.